အရွယ်မရောက်သေးသူကို လိင်ကိစ္စ အမြတ်ထုတ်မှုဖြင့် အဲဗာတန်အသင်းမှ ကစားသမားတစ်ဦး ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ဖမ်းဆီးခြင်းခံရ – Sports A2Z
အရွယ်မရောက်သေးသူကို လိင်ကိစ္စ အမြတ်ထုတ်မှုဖြင့် အဲဗာတန်အသင်းမှ ကစားသမားတစ်ဦး ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ဖမ်းဆီးခြင်းခံရ
ပြီးခဲ့တဲ့သောကြာနေ့က အဲဗာတန်အသင်းရဲ့ ၃၁ နှစ်အရွယ်ကစားသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပြစ်မှုတစ်ခုမှာ သံသယရှိသူအဖြစ် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး မန်ချက်စတာ ရဲတပ်ဖွဲ့ မှ ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခု ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
“၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်နေ့က အရွယ်မရောက်သေးသူကို လိင်ကိစ္စ အမြတ်ထုတ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုနဲ့ ၃၁ နှစ်အရွယ် အိမ်ထောင်ရှိ အမျိုးသားတစ်ယောက်ကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိပြီး အာမခံနဲ့ထားထားသလို နောက်ထပ်စုံစမ်းမှုတွေ ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်”လို့ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက အဲ့ဒီကစားသမားရဲ့ ‌ပေါင် ၂ သန်းတန် နေအိမ်ကို သက်သေခံပစ္စည်းရှာဖို့အတွက် စီးနင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ သတင်းအရင်းမြစ်တစ်ခုကတော့ “ပစ္စည်းတွေအများကြီးကို ရဲတွေက သိမ်းဆည်းသွားတယ်။ ပြစ်မှုတွေအတွက် ဘယ်လိုပတ်သက်တယ်ဆိုတာကို အလေးအနက်ထားပြီး သူ့ကို မေးနေကြတယ်” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး သူက “အဲ့ဒီသတင်းတွေက အသင်းရဲ့ အဝတ်လဲခန်းတစ်ခုလုံးကို အံ့ဩသွားစေပြီး အသင်းက ပွဲပယ်တာ ခံရတဲ့နောက်တော့ အဲ့ဒီကစားသမားလည်း ဟိုးအောက်ထိ ထိုးကျပြီပဲပေါ့”လို့ ပြောသွားခဲ့ပါသေးတယ်။
အဲဗာတန်အသင်းကတော့ “ရဲတပ်ဖွဲ့က အမှုတစ်ခုအတွက် ကျွန်တော်တို့ကစားသမားတစ်ယောက်ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးဆဲကာလဖြစ်လို့ အဲ့ဒီကစားသမားကို လတ်တလောကာလမှာ အသင်းက ထုတ်ပယ်ထားပါတယ်။ အဲ့ဒီအမှုအတွက် စုံစမ်းမေးမြန်းမှုတွေကိုတော့ ဆက်လက်ကူညီသွားမှာဖြစ်ပြီး ကြေငြာချက်ထပ်မထုတ်ပြန်တော့ပါဘူး”လို့ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ယခုလို ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရတဲ့ အိမ်ထောင်ရှိတဲ့ ၃၁ နှစ်အရွယ် အဲဗာတန်ကစားသမားဆိုတာ အဲဗာတန်အသင်းအားထားရတဲ့ ကွင်းလယ်ကစားသမား ဆီဂတ်ဆန် ဖြစ်တယ်လို့ လူမှုကွန်ယက်တွေပေါ်မှာ ခန့်မှန်းပြောဆိုနေကြပြီး အီတလီ ၂၄နာရီ သတင်းဌာနမှလည်း ရေးသားဖော်ပြထားချက်အရ သိရှိရပါတယ်။
ဆီဂတ်ဆန်ဟာ ဇနီးဖြစ်သူ မစ်အိုင်ယာလန် ၂၀၀၈ အီဗာစ်ဒေါ့တာနဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ လက်ထပ်ခဲ့ပြီး သူရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူကတော့ ယခုလို ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရတာဟာ သူမရဲ့ ယောင်္ကျားဖြစ်သူ ဆီဂတ်ဆန် မဟုတ်ဘူးလို့တော့ ငြင်းဆိုထားပါတယ်။
အဲဗာတန်အသင်းမှာ အိမ်ထောင်ရှိ အသက် ၃၁ နှစ်အရွယ် ကစားသမားဆိုလို့ ဆီဂတ်ဆန်နဲ့ ဖေဘီယန် ဒဲ့လ်ဖ်တို့ နှစ်ဦးသာရှိတဲ့အတွက် အီဗာစ်ဒေါ့တာရဲ့ ပြောစကား မှန် မမှန် အဲဗာတန်အသင်းရဲ့ ရာသီကြို ခြေစမ်းပွဲတွေမှာ ဘယ်သူပါဝင်လာပြီး ဘယ်သူက မပါဝင်လည်း စောင့်ကြည့်ပြီးနောက် အဖြေထွက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပရီးမီးယားလိဂ် ပြန်လည်စတင်ဖို့အတွက် ၄ ပတ်လောက်သာ လိုတော့တဲ့အချိန်မှာ အခုလို ပြဿနာတွေဖြစ်လာတာ ရာသီကြိုပြင်ဆင်မှုတွေ ပြုလုပ်နေတဲ့ နည်းပြသစ် ဘင်နီတက်ဇ်ရဲ့ အဲဗာတန်အသင်းအတွက် နစ်နာလှပြီး ဒီအမှုကို ဆီဂတ်ဆန် (သို့) ဖေဘီယန် ဒဲ့လ်ဖ် တကယ်ကျူးလွန်ခဲ့တာလား? အမှုဆင်ခံရတာလား ? ဆိုတာကတော့ …
အာတီတာနဲ့ အာဆင်နယ်တို့ အပြောင်းအရွှေ့တွေအပြီး ရာသီသစ်မှာ ဘယ်လိုပွဲထွက်လာနိုင်လဲ